Volunteer uye Intern - Hinds Feet Farm
Volunteer kana Intern Nesu
Kufarira Muzvipiri Anonyatso kusimudzira kana Chiitiko cheIntern?
Ese ari maviri Hinds 'Feet Farm nzvimbo (Huntersville neAsheville) inopa imwe-ye-ye-yemhando yechokwadi mukana wemubairo kune vanhu vanonyatsoda kuita mutsauko muhupenyu hweavo vasina rombo rakanaka. Yedu yakasarudzika, inotungamirwa nenhengo, nharaunda-yakavakirwa chirongwa inowana simba rayo uye kushanda kwayo kubva mukugadzira, uye kuita simba renharaunda - kwete chete nharaunda yenhengo nevashandi, asiwo nekuita newe - nhengo dzenharaunda-pa- hombe.
Community Volunteers uye Interns chinhu chakakosha uye chakakosha chikamu chechirongwa chedu!
Chii chandinofanira kuzvipira?
Chido chekugovana uye kutora chikamu (kureva: HAPANA ZVINO kana matarenda akakosha / hunyanzvi hunodiwa!)
Chipo Chikuru chaunogona kupa semunhu anozvipira chipo chako uye nguva yako - iwe uchashamisika kuti nhengo dzedu dzinoda sei kuita shamwari itsva uye vanozivana!
Bata Nesu Nhasi Kuti Udzidze Maitiro Ekutanga
Vazvipiri vanoita sei?
Vazvipiri vanogona kupa hunyanzvi uye matarenda ekugadzira kutungamira zviitiko zvemapoka, kana kungouya uye kutandara uye kuve shamwari kune mumwe munhu pachirongwa! Vanozvipira uye Interns vane mapoka anotungamira senge:
Denga ndiro muganhu paunopinda mukati mesimba rekugadzira rakasanganiswa renharaunda yechirongwa!
Kutsvaga yakanaka GROUP Volunteer Experience?
Wazviwana! Kwemakore, mazana evazvipiri kubva kumapoka mazhinji enzvimbo vakapa tarenda ravo, shungu uye zviuru zvemaawa evarume mumapurojekiti akawanda se:
Kuvaka mabhiriji etsoka
Kuvaka mabhenji ebasa
Kuvaka madziro ekuchengetedza
Ndinofarira Kuzvipira kana Kupinda
Hinds 'Feet Farm iri kutsvaga vashandi kuti vashande muchirongwa chedu chemazuva ano chevakuru vane kukuvara kwehuropi huri muAsheville neHuntersville. Nekuti isu tiri sangano diki, iwe unozove nekugona kuita hukuru hukuru nenhengo dzedu. Goverana zvaunofarira, matarenda, uye zvaunofarira, uchibatsira nhengo mukudzidza hunyanzvi hutsva uye kuwedzera rusununguko.
Senhengo yechikwata chedu, uye pasi pekutungamirwa nevashandi vedu vechirongwa chemazuva ese, iwe unopa dzidzo pamusoro pekubatana kwenharaunda uye kukura kwako pachako, kuronga nekuita hukama hwenharaunda, kutungamira mapoka eboka ane chekuita nehunyanzvi uye zvaunofarira iwe nenhengo dzechirongwa, uye kupa nhungamiro yekufambisa basa repamusoro uye kugona kubata kwenhengo yega yega uchiteedzera ese Hinds 'Feet Farm Policies & Matanho zvinoenderana nenhengo yega zvirongwa zvekurapa.
Isu tinofara kuti iwe unofarira kuzvipira kana kupindira nesu paHinds' Feet Farm. Ndapota zadza ruzivo rwese mufomu pazasi uye isu tichasvika kwauri nekukurumidza sezvinobvira!
Kuti tikurumidze kuita izvi, tinokukoka iwe kuti uzadze mafomu ekuzvipira uye kutumira kuna Amanda Mewborn pa amewborn@hindsfeetfarm.org